ओहो! कति मिठो नेपाली स्वादको स्पागेती बोलोनेज | Infomala
स्पागेती बोलोनेज इटालियन खाना हो तर यो सारा पश्चिमा मलुकहरूमा अत्यन्त लोकप्रीय छ । कतिपय युरोपका रेस्टुरेन्टतिर त कसैले स्पागेती भन्यो भने सिधै बोलोनेज ससमा भनेर बुझ्छन् । यो मिठो र अपेक्षाकृत सस्तो पास्ता मेरो पनि चुनिन्दा खाना हो । मलाई बोलोनेजको ‘बिग फ्यान’ भनिदिए पनि हुन्छ । यस्तो बिग फ्यान रेस्टुरेन्टहरूमा जाँदा पटकैपिच्छे बोलोनेज नै खान्छ भन्ने ठान्नु होला । त्यस्तो ठान्नु चाहिँ गल्ती हुन्छ । एक त यो जिब्रो साह्रै चखुवा छ, फरक फरक स्वाद चाख्न खोज्छ । अर्को कुरा, अनि ठुलो दुःखेसोको कुरा, मैले चाहँदा पनि बारम्बार पास्ता बोलोनेज खान पाउन्नँ । किन पाउन्नँ भने, यी युरोपेलीहरूले बोलो सस प्रायः एकैथरिको मासुमा पकाउँछन् । अनि ‘त्यो चाहिँ मासु’ मेरो मनले मान्दैन । एकाध ठाउँमा मैले चिकन बोलोनेज भेटेको छु र त्यतिखेर म छोड्दिन ।:-)
आज किनकिन यो बोलोनेजको साह्रै याद आयो मला । र, यो हप्ताको छुट्टीको फुर्सदमा लामो समयको ग्यापपछि म बोलोनेज बनाउन तम्सिएँ । बोलोनेज मात्र बनाइएन, फोटो पनि खिचेँ । नेपाली बन्धुहरूका निम्ति मेरो संशोधित इटालियन रेसपी
पूर्वतयारी र कुकिङ समय- करिब एक घण्टा
हाम्रो तयारी– चार प्लेटका निम्ति
५०० ग्राम कीमा मासु (minced meat) – मैले कुखुराको कीमामा बनाएँ । मासु त आ-आफ्नो रोजाई हो ।
२ डल्ला प्याज- मसिनो बनाएर काट्ने
३ डल्ला टमाटर- मसिनो बनाएर काट्ने
२ वटा गाजर
२ पोटी लसुन र १ वा २ ढिँडी खुर्सानी
४०० ग्राम स्पागेती
तेल, नून र मसला
१) डेक्ची, कडाही वा गहिरो खालको कुनै पनि फ्राईपिनमा तेल ठिक्क तताउने । त्यसमा कीमा मासु एकछिन (करिब ३/४ मिनेट) भुट्ने । त्यसैबीच, नून र बेसार मिसाउने । चिया-चम्चाको करिब २ चम्चा नून ठिक्क हुन्छ । (नून कति मिसाउने कुनै आइडिया नभए जस्तो लागे पहिले हल्का थोरै राखेर पछि सस चाखेर थप्न पनि सकिन्छ ।) अनि तापक्रम मझौला धीमा बनाउने । मासु खैरो रंगको बन्न जान्छ ।
२) त्यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज र गाजर थप्ने र करिब ५/७ मिनेट चलाउँदै पकाउने । प्याज गल्न थाल्छ । गाजर गिलो हुनथाल्छ । त्यसमाथि थिचेको लसुन, खुर्सानी र मरमसला (जीरा,धनियाको धूलो र आफ्नो स्वादअनुसार मिटमसला पनि) मिसाउने । अरू ८/१० मिनेट बेलाबेलामा चलाउँदै पकाउने ।
३) अनि त्यसमा मसिनो गरी काटेको टमाटर राम्ररी घुलमिल हुने गरी मिसाएर पाक्न दिने । बेलाबेलामा चलाउने । १५ मिनेट जति पाक्न दिने । धीमा तापक्रम भए अल्लि समय लिन्छ । र धीमा तापक्रममा पाकेर बाक्लिएको सस मिठो पनि हुन्छ ।
४) यता बोलोनेज सस पाक्दै गर्दा अर्को चुल्होमा हल्का नूनिलो पानी उमाल्ने । त्यो उम्लँदो पानीमा स्पागेतीलाई ८/९ मिनेट उमाल्ने । स्पागेती पाकेपछि मनतातो पानीमा पखाल्ने ।
५) एउटा भाँडोमा बोलोनेज सस तयार भयो र अर्कोमा स्पागेती । अब स्पागेतीलाई बोलोनेज ससको भाँडामा राम्ररी मिसाउने, मुछ्ने । बस् ! तयार भयो । अब पास्ता प्लेट (बटुको जस्तो प्लेट) मा खन्याउने । नेपाली जिब्रोको स्वादअनुसार हरियो धनिया पत्ता काटेर स्पागेतीमाथि (topping) राख्न पनि सकिन्छ । त्यसमा पार्माजान वा आफूलाई मनपर्ने चीज (Cheese) को धूलो राखेर खाँदा अझ स्वादिलो हुन्छ ।
बोनपेतितो ! ( मतलब, ज्युनार होस् !)
Previous Post५० ठाउँमा RIP लेख्नेसँग
Next Postआफैलाई सोध्नुहोस् यी ५ प्रश्नहरू
Post category:अवशेष / शैली